OAIC Notice - Immigration Data Breach Privacy Complaint - Burmese - Home
OAIC Notice - Immigration Data Breach Privacy Complaint - Burmese
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချက်အလက်ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စရပ်များချိုးဖောက်ခြင်း တိုင်ကြားချက်
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင် လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်နယ်စပ်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးဌာန (ယခုပြည်ထဲရေးဌာန) (ဦးစီးဌာန) သည်၎င်း၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ၀င်သည့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များ (Data Breach) ပါ၀င်သည့်ထိန်းသိမ်းရေးအစီရင်ခံစာအား မှားယွင်းစွာ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၃၁ ရက်နေ့တွင် လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေး၏စခန်း၌နေထိုင်သူ ၉,၂၅၈ ဦး ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် သတင်းအချက်အလက်အမှားအယွင်းများပါ၀င်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များ (အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များ) ကိုယ်စား သြစတြေးလျသတင်းအချက်အလက်ကော်မရှင်နာရုံး (OAIC) ​​သို့ကိုယ်စားပြုတိုင်တန်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တိုင်ကြားချက်မှာ ဌာနကို တောင်းပန်ရန်နှင့်လျော်ကြေးပေးရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။
၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၉ ရက်နေ့တွင် မူရင်းကိုယ်စားလှယ် တိုင်ကြားသူရှေ့နေသည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း OAIC ကို အကြံပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ အောက်တိုဘာလ၊ ၁၀ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်နာသည်မူလကိုယ်စားလှယ်တိုင်ကြားသူအား (၁၉၈၈) လုံခြုံရေးအက်ဥပဒေ (Privacy Act) 38B (1) အရ အခြားလူတန်းစားအဖွဲ့ဝင် (ကိုယ်စားလှယ်တိုင်ကြားသူ) ကို အစားထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Slater နှင့် Gordon တို့သည် တိုင်ကြားသူအား ကိုယ်စားပြုသည်။ Slater နှင့် Gordon နှင့်ပတ်သက်သော သတင်း အချက်အလက်များ ကို ၎င်းတို့ ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့သည် အချက်အလက်ဖောက်ဖျက်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီး ထိုဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် လျော်ကြေးငွေကိုပြန်လည်ရယူရန် အခွင့်အလမ်းရလိုပါက အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် OAIC သို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပြီလ ၁၉ ရက်ညနေ ၄း၀၀ မတိုင်မီ ၎င်းတို့၏ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးမှုအတွက် သတင်းအချက်အလက်ပေးအပ်တင်ပြရန် လိုအပ်ကြောင်း ကော်မရှင်နာမှ (သတိပေးချက်) အတိပေးခဲ့သည်။
အသိပေးချက်တုန့်ပြန်ဖြေကြားရမည့်နေ့ရက်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။ OAIC သည်အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များအား ထပ်မံတိုးခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တင်ပြချက်များကို အပြီးသတ်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှ သီးသန့်တည်ရှိမှုအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅၂ အရ (ဆုံးဖြတ်ချက်) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဆုံးဖြတ်ချက် မှ တွေ့ရှိရသည်မှာ-
အချက်အလက်ဖောက်ဖျက်မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့် ဌာနသည် လူတဦးတယောက်၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အပြုအမူများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်
တင်ပြခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ်အသိပေးခြင်း (ပါဝင်သောအတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များ) အား တုန့် ပြန်၍ ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ပျက်စီးခြင်းသက်သေအထောက်အထားများတင်ပြသောအတန်းအစားများကိုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှ သတ်မှတ်သည့်နည်းအတိုင်းလျော်ကြေးပေးရမည်။
ပါဝင်ဆောင်ရွက်သောအတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များအား လျော်ကြေးငွေကို အောက်ဖော်ပြပါ ဇယား (ဇယား 1) တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအမျိုးအစားများနှင့်အညီ ပေးရမည်ဟု ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များကြုံတွေ့ရသည့်ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အမျိုးအစားဇယားနှင့်လျော်ကြေး ပေးခြင်း ညွှန်းကိန်းများ
အချက်အလက်ချိုးဖောက်မှုကြောင့်ရရှိသောအထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု သို့မဟုတ် အရှက်ရခြင်း၊
ပုံမှန်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ နာကျင်မှုနှင့်ဝေဒနာများ၊ စိတ်ဖိစီးမှု (သို့) အရှက်ရခြင်းတို့သည် အချက်အလက်ချိုးဖောက်ခြင်း မှရရှိသောအိပ်မရခြင်းသို့မဟုတ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောအသေးစား ဇီဝကမ္မလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးကျန်းမာရေးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးစေနိုင်သည်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်သောအချက်အလက်များချိုးဖောက်ခြင်းမှရရှိသောသိသာထင်ရှားသောသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ နာကျင်မှုနှင့်ဆင်းရဲခြင်း၊ ၎င်းသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အခြားထိခိုက်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ယေဘုယျဆရာ၀န် တဦးထံမှသတ်မှတ်ထားသောကုသမှု လမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
အချက်အလက်ဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း ကုသမှုအတွက်စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုသို့ လွှဲပြောင်းရခြင်း
အချက်အလက်ဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်အကြီးအကျယ်ဆုံးရှုံးခြင်း သို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်း
အမျိုးအစား 0: $0
အမျိုးအစား 1: $500 - $4000
အမျိုးအစား 2: $4001 - $8000
အမျိုးအစား 3: $8001 - $12 000
အမျိုးအစား 4: $12 001 - $20 000
အမျိုးအစား 5: > $20,000
စီးပွားရေးမဟုတ်သောဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်းတွက်ချက်မှုတွင် ကူညီရန် ဇယား ၁ ကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုတွက်ချက်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ဒေတာချိုးဖောက်မှုကြောင့်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးထိုဆုံးရှုံးမှုကိုသက်သေပြရန် သက်သေအထောက်အထားများ တင်ပြခဲ့ကြသောအတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များအား စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက် ပေးချေရမည်။ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို တစ်ဦးချင်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်ရမည်။
ဒေတာချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆုံးရှုံးမှု (သို့) ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက် လျော်ကြေးပေးရန်အတွက်ပါ ၀င်သောအတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များ ထံမှတောင်းဆိုမှုများကိုအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အပြီးသတ်ခြင်းစသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ဦး စီးဌာနမှလို က်နာရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြထားသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် -
ဦးစီးဌာနသည် ပါ၀င်သောတင်ပြချက်များနှင့်/သို့မဟုတ် ပေးအပ်သည့်ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ်ပျက်စီးမှု အထောက်အထားများအပေါ် အခြေခံ၍ ပါဝင်သောအတန်းအစားအဖွဲ့ဝင် တဦးချင်းစီအတွက်လျော်ကြေးပမာဏကို သတ်မှတ်ပေးပြီး၊ အမျိုးအစားများဇယားနှင့်အညီအတန်းဝင်များ၏ပြောဆိုချက်များကိုထင်ဟပ်စေရန်နှင့် စီးပွားရေးမဟုတ်သောဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်း တွက်ချက်မှုကို အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်သည်။
ဦးစီးဌာနသည် အဆိုပြုထားသောလျော်ကြေးပမာဏနှင့်သက်ဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများကို ပါ၀င်နေသောအတန်းအစား၀င်များသို့ဖြစ်စေ၊ သူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်ကိုဖြစ်စေ ဆက်သွယ်၍ လျော်ကြေးပမာဏကိုသဘောတူသည်။
ဦးစီးဌာနနှင့်အတန်းအစား၀င်များသည်လျော်ကြေးပမာဏကိုသဘောမတူပါက ဦး စီးဌာနသည် လျော်ကြေးပမာဏကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်နိုင်ပြီးပြန်လည်ပါ၀င်သည့် လျော်ကြေးပမာဏအပေါ် ပါ ၀င်နေသော အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ သဘောတူညီချက်ရယူနိုင်သည်။
ပါတီများအနေဖြင့်ပါ၀င်သောအတန်းအစားကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်ပြီးနောက်တာ၀န်ပေးမည့် ဇယားပါ အမျိုးအစားကိုသဘောမတူနိုင်ခြင်းနှင့်ပါတီတစ်ခုချင်းစီမှမတူကွဲပြားသောအမြင်များအတွက်အထောက်အထားအချို့ရှိလျှင်ထပ်မံတင်ပြခြင်းများအားဖြင့် ရယူနိုင်သည်။ ပါ၀င်သောအတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များသည် အကဲဖြတ်မှုကိုခံယူပြီးနောက် ၂၈ ရက်အတွင်း (သို့မဟုတ်ရှိလျှင်ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်း) ရရှိပြီး ၂၈ ရက်အတွင်းတုံ့ပြန်ဖြေကြားသူ၏အကဲဖြတ်ချက်အားတုံ့ပြန်မှုမရှိပါက ကျွမ်းကျင်သူအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ပဏာမအကဲဖြတ်ပြီးနောက်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဦးစီးဌာနသည် ကျွမ်းကျင်သောအကဲဖြတ်မှုအတွက် ကိစ္စတစ်ခုကိုလည်းရည်ညွှန်းနိုင်သည်။
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောနေ့မတိုင်မီ OAIC သို့တင်ပြခြင်းနှင့်/ သို့မဟုတ် သက်သေအထောက်အထား များကိုတင်ပြခြင်းမရှိသော၊ ငြင်းပယ်ခြင်းမရှိသောအတန်းအစား၀င်များသည် ၄​​င်းတို့၏ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ် ပျက်စီးခြင်းများခံစားခဲ့ရကြောင်း သက်သေပြခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စပ်လျဉ်း မည်သည့် ထပ်မံလုပ်ဆောင်မှုများကို မပြုလုပ်သင့်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ညသန်းခေါင်ယံအချိန်တွင် သြစတြေးလျပြည်မကြီးသို့ မဟုတ်ခရစ်စမတ်ကျွန်းတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်း၌ရှိနေပြီးကိုယ်စားလှယ်၏တိုင်ကြားချက်တွင်ပါ ၀င်ခြင်းမပြုပါက၊ အဆိုပါစိတ်ပိုင်းဖြတ် ''အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်'' အဖြစ် ဆုံးဖြတ်ချက် ကသက်ဆိုင်သည်။
လူတန်းစားအဖွဲ့ဝင်များတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများရှိလူပေါင်း ၅,၈၆၇ ဦး နှင့်အခြားထိန်းသိမ်းထားသည့်နေရာများ (ပြည်မကြီးတွင်လူ ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေးမှထိန်းသိမ်းထားသော ၃,၉၆၇ ဦး နှင့်ခရစ္စမတ်ကျွန်းတွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်း၌ ၁၉၀၀) နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်ညသန်းခေါင်ယံအချိန်၌ရပ်ရွာအတွင်းနေထိုင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်နေထိုင်သူများ ၃,၃၁၁ ဦးပါဝင်သည်။
တင်ပြချက်များကိုတင်ပြခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ်သက်သေပြခြင်းအားဖြင့်အတန်းအစားဝင်များသည် အချက်အလက်ဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းသက်သေပြသည့်သက်သေများကိုတင်ပြသူများကိုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှဆုံးဖြတ်သည့်နည်းအတိုင်းလျော်ကြေးရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
သတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီ OAIC အား ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အထောက်အထားများကို တင်ပြခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်းမရှိသောအတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်ကို ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းသက်သေမပြခဲ့လျှင် လျော်ကြေးရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
တင်ပြချက်များကိုတင်ပြခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ်သက်သေပြခြင်းအားဖြင့်အတန်း၀င် များသည် အချက်အလက် ဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းသက်သေပြသည့်သက်သေများကိုတင်ပြသူများကိုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှဆုံးဖြတ်သည့်နည်းအတိုင်းလျော်ကြေးရသင့်ပါသည်
အချက်အလက်များဖောက်ဖျက်ခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ်သက်သေပြခြင်းအားဖြင့်အတန်းအဖွဲ့ဝင်များသည်ဒေတာချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းသက်သေပြသည့် အဖွဲ့ ၀င် များသည်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှချမှတ်သည့်နည်းအတိုင်းလျော်ကြေးရသင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤပါ၀င်သော အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်နေလျှင် ဌာနသည်သင်၏တောင်းဆိုချက် အပေါ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သင့်အားသူတို့၏အကဲဖြတ်မှုကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်သင့်အားအကြံပေးရန်သင့်အားတောင်းဆိုလာလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှ သတ်မှတ်ထားသောနည်းအတိုင်း လျော်ကြေးငွေရမည့် အတန်းအဖွဲ့ဝင်တဦး ဟုတ်မဟုတ် မသေချာလျှင် OAIC သို့အီးမေးလ် enquiries@oaic.gov.au ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပါ၀င်သောအတန်းအစားဝင်တဦး ဖြစ်လျှင်၊ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် ဌာနက အောက်ပါအရာများအကြံဥာဏ်ပေးရန် သင့်ထံစာရေးဆက်သွယ်လိမ့်မည်
ဇယား ၁ ကို ကိုးကား၍ သင်၏တောင်းဆိုမှုသည်သင်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအမျိုးအစားနှင့်ကိုက်မကိုက်
အကဲဖြတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက်ဌာန၏အကဲဖြတ်မှုကိုသင်ရရှိပြီး ၂၈ ရက်အကြာတွင်သင်ရရှိလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် အကဲဖြတ်မှုကိုထပ်မံစဉ်းစားရန် နောက်ထပ်အချိန်လိုအပ်ပါက အချိန်တိုးချဲ့ရန် တောင်းဆိုရန်ဌာနကို ဆက်သွယ်ပါ
သင်၏တောင်းဆိုမှုများအတွက်ဌာန၏လျော်ကြေးပေးခြင်းအကဲဖြတ်ချက်ကိုသဘောတူပါကဌာနမှသင့်အားပေးအပ်သည့်တုံ့ပြန်မှုပုံစံကိုအကဲဖြတ်ချက်တွင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ ပြန်လည်ဖြေကြားမှုပုံစံတွင်သင်အကဲဖြတ်ခြင်းကိုသဘောတူကြောင်းဌာနသို့ အကြံပေးသင့်သည်။ အမှုကိစ္စတွင် ဦးစီးဌာနက သင့်အားသတ်မှတ်ထားသော ဘဏ်စာရင်းသို့လျော်ကြေးပေးရန် သင့်အားပေးလျော်သောကာလအတွင်းတွင် သင့်ကိုလျှော်ကြေးပေးလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ယင်းသည် သက်ဆိုင်ရာအတိုင်းပြန်လည်ပေးချေခြင်း ဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ပတ်သက်လျှင် Medicare ထံမှအတည်ပြုချက်ကိုမူတည်ပြီး သဘောတူညီချက်ရရှိပြီး ၁၄ ရက် အတွင်း လုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
သင့်အားပေးအပ်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ဆောင်မှုအချို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အသိပေးခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများသည် ပေါ်ပေါက်လာသည်၊ သို့သော် ၄င်းမှာ Medicare မှပေးဆောင်ထားသောအရာ ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ လျော်ကြေးပေးသည့်တန်ဖိုးသည် သင်ရရှိသည့် Centrelink ငွေပေးချေမှုများကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
ဌာန၏အကဲဖြတ်မှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၂၈ ရက် အတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားမှုပုံစံကိုဌာနသို့ သင်ပြန်ပို့သင့်ပါသည်။
သင်၏တောင်းဆိုမှုအတွက်ဌာန၏လျော်ကြေးပေးခြင်းအကဲဖြတ်ချက်ကိုသဘောမတူပါက၊ ဌာနမှသင့်အားပေးသောတုန့်ပြန်ချက်ပုံစံကိုသင်ကသူတို့၏အကဲဖြတ်မှုကိုငြင်းပယ်ကြောင်းဖြည့်စွက်ပေးပို့သင့်သည်။ ဌာန၏အကဲဖြတ်မှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၂၈ရက် အတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားမှု ပုံစံကိုဌာနသို့ ပြန်ပို့သင့်သည်။
များသောအားဖြင့်ဌာနအနေဖြင့်သင်၏လျော်ကြေးအတွက်သင်၏တောင်းဆိုချက်ကိုပြန်လည် အကဲဖြတ်ရန်နှင့်သူတို့၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်အတွက်နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ဌာနသည်ပြန်လည်အကဲဖြတ်မှုအစားကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာအကဲဖြတ်မှုအတွက်သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုရည်ညွှန်းရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ သင့်အားဌာနမှပြန်လည်အကဲဖြတ်မှုခံယူပြီးနောက်၎င်းကိုလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်အတွက်နောက်ထပ် ၂၈ ရက် အကြာကို သင်ထပ်မံရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင်ပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန် စဉ်းစားရန် နောက်ထပ်အချိန်လိုအပ်ပါက အချိန်တိုးရန်တောင်းဆိုရန်ဌာနသို့ဆက်သွယ်ပါ။
အကယ်၍ သင့်အားတာ၀န်ပေးအပ်ထားသည့်ဇယားရှိအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ သဘောမတူခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဌာန၏ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်းကို ငြင်းဆိုပါကပါတီတစ်ခုချင်းစီမှမတူကွဲပြားသော အမြင်များအတွက် အထောက်အထားအချို့ရှိပါက ကျွမ်းကျင်သူအကဲဖြတ်မှုမှတစ်ဆင့် နောက်ထပ်တင်ပြမှုများရရှိနိုင်ပါသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ဌာနသည် ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်းအစား ကျွမ်းကျင်မှု အကဲဖြတ်မှုအတွက်သင်၏တောင်းဆိုမှုကို ရည်ညွှန်းရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အကဲဖြတ်မှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ၂၈ ရက်အတွင်း ဦးစီးဌာန၏ အကဲဖြတ်ချက်ကို သင်တုံ့ပြန်မှုပျက်ကွက်ပါကသို့မဟုတ်သင်လက်ခံရရှိပြီးနောက် ၂၈ ရက်အတွင်း ဌာန၏ပြန်လည် အကဲဖြတ်ချက် (ရှိပါက) ကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်ပါက ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဦး စီးဌာနအနေဖြင့် OAIC အားသင်တုန့်ပြန်မှုမရှိဟုအကြံပေးသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်သည် သင်၏တောင်းဆိုချက်အတွက် လျော်ကြေးပမာဏကိုကြေငြာလိမ့်မည်။
ကျွမ်းကျင်သူအကဲဖြတ်ခြင်းမှာ လွတ်လပ်သောတတိယပါတီ (ပြင်ပပါတီ) ကျွမ်းကျင်သူတဦး ကအကဲဖြတ်ခြင်းကို ဆိုသည်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူပါတီများတင်ပြသော သက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အခြေခံပြီးအကဲဖြတ်စေရန် သူ၏ သို့မဟုတ် သူမ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အသိပညာကိုအသုံးပြုသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များသည် OAIC မှသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း တစ်ဉီးတစ်ယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ် အကဲဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး ခန့်အပ်ထားသောလုပ်ငန်းကိုထမ်းဆောင်ရန်သင့်တော်သောအရည်အချင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောသူ ဖြစ်ပါမည်
ကျွမ်းကျင်သူများကိုဌာနနှင့် Slater နှင့် Gordon (စုပေါင်းပါတီများ) ကရွေးချယ်လိမ့်မည်။ ပါတီများကကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များအားဆုံးဖြတ်ပြီးသည်နှင့်ပါတီများအနေဖြင့် OAIC အား သတင်းအချက်အလက် ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုချက်အတွက်ကျွမ်းကျင်သူ (များ) ၏အမည်များ၊ သူတို့၏နောက်ခံအခြေအနေ၊ အရည်အချင်းနှင့်အတွေ့အကြုံနှင့် သူတို့အဘယ်ကြောင့် သင့်လျော်ကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ရှင်းလင်းချက်ကို ပေးလိမ့်မည်။
ကျွမ်းကျင်သူများက ၎င်းတို့၏အကဲဖြတ်မှုကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားမှာလဲ?
ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်၏ပြဌာန်းခွင့် - ဤနေရာ တွင် ဝင်ကြည့်နိုင်သည်- တွင် ပြဌာန်းထားသည့်အတိုင်း
စီးပွားရေးအရဆုံးရှုံးမှု နှင့် စီးပွားရေး
မဟုတ်သောဆုံးရှုံးမှု စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူမှ အကြံပြုပေးသွားပါလိမ့်မည်။
ပါ၀င်သောအတန်းအစားဝင်မှတောင်းဆိုသောစီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးမဟုတ်သောဆုံးရှုံးမှုအတွက် ကျွမ်းကျင်သူသည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုသတ်မှတ်ပေးရမည်။ စီးပွားရေးမဟုတ်သော ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပမာဏကိုအထက်ပါဇယား ၁ ကိုကိုးကားပြီးကျွမ်းကျင်သူမှသတ်မှတ်လိမ့်မည်။
စီးပွားရေးမဟုတ်သောဆုံးရှုံးမှုအတွက်လျော်ကြေးပေးခြင်းတွက်ချက်မှုတွင်ကူညီရန်ဇယား ၁ ကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုတွက်ချက်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုတဦး ချင်းစီအနေဖြင့်အကဲဖြတ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်သည် စာရွက်စာတမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ပါဝင်သူအတန်းအစားကို အောက်ပါအချက်အပေါ်အခြေခံ၍ ချီးမြှင့်မည့်ပမာဏကိုထောက်ခံသည့်ကျွမ်းကျင်သူသည်အကဲဖြတ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်
အသိပေးချက်တွင်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီပါဝင်သူအတန်းမှအဖွဲ့ဝင်များက OAIC သို့ပေးအပ်သည့်ဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးမှုအထောက်အထားများကိုတင်ပြခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ်သက်သေအထောက်အထားများ။
ဌာန၏ပြန်လည်အကဲဖြတ်ခြင်း (ရှိလျှင်) နှင့်အကြောင်းပြချက်
အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူသည် ၎င်းတို့၏ထောက်ခံချက်နှင့်ပူးတွဲအကြောင်းပြချက်များကို မိတ္တူအား အခြားအဖွဲ့များကို မိတ္တူများပေးပြီး OAIC ထံ မူရင်း တိုက်ရိုက်ပေးပါလိမ့်မည်။
ကျွမ်းကျင်သူများမှ အကဲဖြတ်မှု မလုပ်မီ သို့မဟုတ် လုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ၎င်းတို့ထံ ထပ်မံတင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် သက်သေအထောက်အထားများ ပေးအပ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ် လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်ရှိပါသေးသလား?
ပါတီများအနေဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေ နောက်ထပ်တင်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ် သက်သေ အထောက်အထားများကို ကျွမ်းကျင်သူအားတင်ပြရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။
ကျွမ်းကျင်သူရဲ့အကဲဖြတ်မှုသည် တရားဝင် တာဝန်ခံပေးတာလား?
အဆိုပါအကဲဖြတ်မှုကို ထောက်ခံချက်အကြံပြုချက်အဖြစ်နဲ့သာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည် ဖြစ်ပြီး ပါတီများအပေါ် တရားဝင်တာဝန်ခံပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွမ်းကျင်သူ၏အကဲဖြတ်မှုကို လက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန်အခွင့် ကျွန်ုပ်မှာ ရှိပါသလား?
ကျွမ်းကျင်သူရဲ့အကဲဖြတ်မှုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အချက်အလက်များသို့မဟုတ်သက်သေအထောက်အထားများကို ပေးအပ်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိပါ။သို့သော် ကျွမ်းကျင်သူ၏အကဲဖြတ်မှုကို လက်ခံရန်သို့မဟုတ်ငြင်းပယ်ရန် သင့်မှာ အခွင့်အရေး ရှိသည်။
ကျွမ်းကျင်သူ၏အကဲဖြတ်မှုကိုသင်သဘောတူပါကသင်သဘောတူသည့်ဌာနကိုအကြံပေးသင့်သည်။ အကယ်၍ ဌာနသည်အကဲဖြတ်မှုနှင့်သဘောတူပါကသင့်တော်သောကာလအတွင်းသင့်လျော်သောလျော်ကြေးငွေကိုဌာနမှသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်းငွေကြေးပြန်လည်ပေးအပ်ရန်တာ၀ န်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ Medicare ထံမှအတည်ပြုချက်ကိုမူတည်ပြီးသဘောတူညီချက်ရရှိပြီး ၁၄ ရက် အတွင်း လုပ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်။
သင့်အားပေးအပ်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ဆောင်မှုအချို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အသိပေးခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများသည် ပေါ်ပေါက်လာသည်၊ သို့သော် ၄င်းမှာ Medicare မှပေးဆောင်ထားသောအရာ ဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
သင်၏ တောင်းဆိုမှု ကိုကျွမ်းကျင်သူ၏ အကဲဖြတ်မှုနှင့်သင်သဘောမတူပါက သင်သဘောမတူကြောင်း ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အားအကြံပေးသင့်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ဌာနသည် သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုကျွမ်းကျင်သူ၏ အကဲဖြတ်မှုအပေါ် သဘောမတူတာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအခြေအနေနှစ်ခုလုံးတွင်သင်၏တောင်းဆိုမှုအတွက်လျော်ကြေးပမာဏကိုကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ကဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးလိမ့်မည်၊ သို့သော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေ့မှ ၁၂ လထက် ပို၍ နောက်မကျပါ။
ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်အခါဌာနသည်သင့်အားသင့်လျော်သောကာလအတွင်းကော်မရှင်နာမှသတ်မှတ်သောလျော်ကြေးပမာဏကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ယင်းသည်ဆုံးဖြတ်ချက်အား အသိပေးအကြောင်းကြားပြီး ၁၄ ရက် အတွင်းပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်၊ သက်ဆိုင်သည့်အတိုင်းလျော်ကြေးငွေ ပေးအပ်ရန်တာ၀န်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ Medicare ထံမှအတည်ပြုချက်ကိုခံယူရမည်။
ကိုယ်စားလှယ်တိုင်ကြားသူသည်အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များကိုယ်စား OAIC သို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတိုင်ကြားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလူတန်းစားအဖွဲ့ဝင်များ၏အကျိုးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Slater နှင့် Gordon တို့သည် တိုင်ကြားသူအားကိုယ်စားပြုသည်။
ကိုယ်စားတိုင်ကြားသူသည် အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များ၏တောင်းဆိုမှုများကိုယေဘုယျအားဖြင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပြီးဖြစ်သလို ဆက်လက်ပါ၀င်နေမည် ဖြစ်ပြီး ၄င်းပါဝင်လုပ်ဆောင်သည့်အရာများမှာ ဥပမာအားဖြင့်ဌာနမှကျွမ်းကျင်သူများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပါ၀င်သော အတန်းအစားအဖွဲ့ဝင်များ၏စာရွက်စာတမ်းများကို အပြီးသတ်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတို့တွင် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးသော်လည်း တစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွင် ပါဝင်ရန် အခွင့် မရှိပါ။
အထက်ဖော်ပြပါဇယား ၁ တွင်ဖော်ပြထားသောဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအမျိုးအစားကိုဆန်းစစ်ရန်
တိုင်ကြားသူနှင့်အတူကျွမ်းကျင်သူ (များ) ကိုရွေးပြီးကော်မရှင်နာကိုခွင့်ပြုချက်ပေးရန်တင်ပြရန်
လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြီးကြပ်ရာတွင်ကော်မရှင်နာသည်ပါဝင်သူအတန်းဝင်တဦး သည်ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ငွေပေးချေမှုကိုရပိုင်ခွင့်ကိုတည်ထောင်ရန်နည်းလမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းထင်မြင်သည့်အတိုင်း (ရှိခဲ့လျှင်) ငွေပေးချေမှုတွင်ပါ ၀င်သောအတန်းဝင်တဦး ၏အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အငြင်းပွားမှုကို မဆိုဆုံးဖြတ်ရန်နည်းလမ်းများ အခြားနောက်ထပ်လမ်းညွှန်ချက်များကိုပေးလိမ့်မည်။
ယခင် Medicare သက်သာခွင့်များကို လက်ခံရရှိခြင်းသည် လျော်ကြေးပေးခြင်းအပေါ်မည်သို့ အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း
သင့်အားပေးအပ်ထားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ဆောင်မှုအချို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ငွေကြေးပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်အသိပေးခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများသည် ပေါ်ပေါက်လာသည်၊ သို့သော် ၄င်းမှာ Medicare မှပေးဆောင်ထားသောအရာ ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်ချိုးဖောက်မှုကြောင့်သင့်အားပေးအပ်သောလျော်ကြေးပမာဏသည်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အထက်ဖြစ်ပါကသင်သည် Medicare ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ပါက သင့်အားမည်သည့်လျော်ကြေးငွေ မပေးအပ်မီ Medicare မှအတိတ်ကာလအကျိုးခံစားခွင့်ဆိုင်ရာအသိပေးစာကိုတောင်းခံရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အတိတ်သက်သာခွင့်များအကြောင်းကြားစာတောင်းခံရန်ပထမအဆင့်မှာ Medicare သမိုင်းဆိုင်ရာ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုတောင်းဆိုရန်ဖြစ်သည်။ သင်အောက်ပါဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားရောက်ခြင်းအားဖြင့် Medicare သမိုင်းကြေညာချက်ကိုသင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။
လျော်ကြေးပေးခြင်းဆုသည်ကျွန်ုပ်၏ Centrelink ငွေပေးချေမှုကို အကျိုး သက်ရောက် မည်လား
သင့်အားလျော်ကြေးပေးခြင်းသည်သင်ရရှိသော Centrelink ငွေပေးချေမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Centrelink ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံရရှိပါကသင်သည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အခြေအနေများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆွေးနွေးရန် Centrelink ကို 1800 777 653 သို့မဟုတ် 131 202 (Multilingual Phone Service) (ဘာသာစကားမျိုးစုံဖုန်းဝန်ဆောင်မှု) တွင်ခေါ်ဆိုပါ။
PHONE: (03) 9413 0100
Wednesday သို့မဟုတ် Friday
သင်က ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ် မှာ နေထိုင်လျှင်
PHONE: (03) 9274 9827
Monday သို့မဟုတ် Thursday
သက်က နယူးဆောက်ဝေးလ်သို့မဟုတ် သြစတြေးလျ Capital Territory တွင် နေထိုင်လျှင် သို့မဟုတ် Queensland တွင်ထိန်းသိမ်းထားလျှင်
သင်သည်သြစတြေးလျတောင်ပိုင်းသို့မဟုတ် Tasmania တွင်နေထိုင်ပါက
သင်က မြောက်ပိုင်းနယ်မြေ မှာနေထိုင်ပါက
သင် အနောက်တိုင်းသြစတြေးလျ တွင်နေထိုင်ပါက
PHONE: (08) 6148 3636
Tuesday only between 2-5pm at
သင် Queensland တွင်နေထိုင်သည်ဆိုပါက သို့မဟုတ် အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော အဖွဲ့အစည်းများသည် သင်၏မေးခွန်းများကိုမဖြေနိုင်လျှင် ဆက်သွယ်ရမည်မှာ
PHONE: (03) 9602 8658
ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်မေးမြန်းလိုပါက OAIC သို့အီးမေးလ် enquiries@oaic.gov.au ဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
OAIC မှအင်္ဂလိပ်မဟုတ် သည့်အခြားဘာသာဖြင့်အကူအညီလိုအပ်ပါက ဘာသာပြန်နှင့် စကားပြန်၀န်ဆောင်မှုဌာနကို ၁၃၁ ၄၅၀ သို့ခေါ်ဆိုပါ။ ထို့နောက် ၁၃၀၀ ၃၆၃ ၉၉၂ ကိုမေးပါ။ လောလောဆယ် OAIC သည်တယ်လီဖုန်းဖြင့်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုအင်္ဂါနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ကြာသပတေးနေ့များမှနံနက် ၁၀ နာရီမှညနေ ၄ နာရီအထိလက်ခံသည်။
စာအမေးအဖြေအားလုံးကိုအောက်ဖော်ပြပါဘာသာစကား ၂၀ အနက်မှတဘာသာ သို့ပြန်ဆိုရန်ဌာနမှစီစဉ်လိမ့်မည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အစောပိုင်းတွင် သင်သည်အင်္ဂလိပ်မှမဟုတ်သော အခြားဘာသာစကား ဖြင့်ဆက်သွယ်မှု ကိုရလိုပါသလား- ဌာနမှ သင့်အားဆက်သွယ် ပါလိမ့်မည်။